my kitchen my life: အန်တီ pasto
အမဲသားကိုလည်း ... အတူတူပဲ။
rucola, melone, bresaola, sedano, vinaigrette ai frutti di bosco
bresaola air dried beef on baby rocket lettuce, celery, sweet melon and wild berry dressing
wild berrry dressing,
Trim the rocket lettuce and wash it.
Trim the celery and peel it from the skin .
Cut the celery in thin flakes.
Cut the bresaola in thin slices.
Cut the sweet melong in thin slices.
Prepare the wild berry dressing: beating the wild berry vinegar with salt and white pepper powder then extra virgin olive oil.
rocket leave ကို အောက်ကနေ ပြန့်ပြန့် ၀ိုင်းဝိုင်းလေ ခင်း ၊ အပေါ်ကနေ sweet melon နဲ့ bresaola ကို ပါးပါးလေး ဖြစ်အောင် slicer နဲ့ ဖြတ်ထားပြီး အထက်ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ကတော့ပုံ လေးတွေ အစီအရီ ကြည့်ကောင်းအောင် ထည့်ရပါတယ်။ ပြီးမှ အပေါ်ကနေ wild berry dressing ကို ဆမ်းထားတာပါ။
antipasto အန်တီပစတို ဆိုတာက before the meal လို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။ အီတလီရဲ့ ရိုးရာ first course တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Italian ဆိုက်က New Menu ပါ။
Posted by leo mark at 11:29 PM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) March 21, 2011 at 2:28 PM